Nepal Dayari | टिपरको ठ’क्करबाट एकजनाको मृ:त्यु, स्थानीयले लगाए टिपरमा आगो !!
टिपरको ठ’क्करबाट एकजनाको मृ:त्यु, स्थानीयले लगाए टिपरमा आगो !!
फागुण १०, २०७८ मंगलबार १४१ पटक हेरिएको
टिपरको ठ’क्क’रबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनापछि आ’क्रो’शित भीडले टिपरमा आ’गज’नी ग’रे’का छन् । आगजनीबाट टि’पर ध्व’स्त भ’एको छ । दोषी चालकलाई कडा कारबाही
पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीयवासीले आ’गो ल’गा’एका हुन् । प्रहरीका अनुसार ना.७ ख.४७४१ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट भारतीय नागरिक अन्दाजी ४५ वर्षीय आनन्द किशोर दासको मृत्यू भएको हो । चौराहामा गलत बाटोबाट हिडेपछि टिपरको दासलाई ठ’क्क’र दिएको र उनको घटनास्थलमै मृत्यू भएको धनुषाका एसपी प्रकाश रानाभाटले जानकारी दिए ।
टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको पनि उनले बताए । अहिले पिडारी चोकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्थानीयले ठ ‘क्क’र दिनेलाई कडा कारबाहीको माग राखेका छन् ।